SomaliTalk.com » SOOMAALI-WAYN: Dhalashadeedii iyo Dhabar-jabkeedii| Casharkii VIII-aad
Daabaco | Print | Faafin: SomaliTalk.com: Sunday, August 21, 2011 // 1 Jawaab
Dilka maqaawiirtii Fallaago, inkasta oo ay ahayd dhacdo kooban, misana waxay reebtey utun taariikh dheer socotey. Waxay kala fogeysey cududda qabaa’ilkii Soomaaliyeed ee isku duddada iyo isku-danta ahaa. Cududdaas oo raggii kacdoonka waday ay doonayeen in ay isla helaan iyada oo is-raacsan si ay Talyaaniga isaga caabiyaan, waxay dhaawacantay dilkii dabadeed. Bal dhacdadu waxay kamid noqotey saldhigyada ay ka guntamaan khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya labada tol-wayne ee ah Daarood iyo Hawiye. Waxay kamid ahayd tan iyo xilligaas kurtamada jid-gooyada ku noqdey sidii aragtida Soomaali-Wayn ay u caga-dhigan lahayd. Halka odeyaasha Daarood ay ka sheekeeyaan in dilkaasi uu ahaa qorshee Talyaanigu ka danbeeyey oo uu kaga hor-tegayay dhaqdhaqaaqa Fallaago, odeyaasha Hawiye waxay ka sheekeeyaan sababta dilka keentey in ay ahayd aano godobeed oo horey looga qabay reerka.
Sabab-kasta haku dhacdee dilkaasi lala beegsadey rag kamid horseedkii Fallaago, waxaa ka dhashay nac iyo is-diid ku tallaalmey qabaa’ilkii ku dhaqnaa gobolka Mudug. Gaar ahaan labada garab ee ah Daarood iyo Hawiye. Waxaan shaki ku jirin gumeystihii Talyaaniga oo aragtida dowladdoodu ay ku dhisneyd faashiyad iyo dadka oo la kala qeybiyo, in dhacadadii ay u noqotey fursad u bilatey mashruuciisii gumeysi-doonka ahaa. Wuxuu markiiba ku dadaaley in uu maal-gelin ku sameeyo si ay ugu mira-dhasho. Waxaa halkaas ku hir-galey aragtidii ay gumeystayaashu ku caan baxeen ee ahayd kala-gee dabadeedna gumee.
Kala go’ee naca iyo is-diidka ku dhisnaa, qaar kamid ah qabaa’ilkii wuxuu ku dhex abuurey colaad af iyo addin leh. Waxaanu tusaal-dhig u soo qaadaneynaa laba gabey oo kamid ah suugaantii badneyd ee xilligaas ay isu tiriyeen abwaanadii xiiseynayay dhacdooyinkii jiray. Abwaan magaciisa la yiraahdo Ciroole Maxamad Keli ayaa gabey tiriyey dhacdadii dilka dabadeed. Suugaatii abwaanka tixaheedii waxay ahayd sidan:
Rugta Ceelcad nimankaa degee ruugga Cayr jebiyey
Iyo gaalka soo rogey rasaas iima kala roona
Riyo guray garoor iiga keen iyo rug oonley ah
Iyo maansadii rogan ahayd iima kala roona
Sayidkii addunkii rogaye reero baabi’iyey
Iyo haatan rowlahakan yimid iima kala roona
Gabadhii an reyn-reyn tegeen raali noqon weysey
Iyo bahalka raarkayga ruday iima kala roona
Nin rujaala ee boqorku rabiyo raxan ulaaleyda
Raqda kii dhigiyo kii la yiri reerka orod caymi
Afartaas nimoo igu rigtamay iima kala roona (Ciroole Maxamad Keli)
Nin la yiraahdo Faarax Cismaan Kowte oo kamid ahaa Fallaago ayaa xilligaas isna tiriyay gabey uu kaga jawaabayo gabeyadii badnaa ee laga tiriyay dhanka beelaha Hawiye. Faarax isaga oo u hadlaya dhanka beelaha Daarood, gabeygiisa wuxuu si gaar ah ugula garamayaa beeshii raggana ka leysey, gabeyadana ay ka yimaadeen. Gabeygii Faarax waxaa kamid ahaa sidan:
Ragga hataan geerarayee giiska tirinaaya
Majeerteena labadiisa gaw gabayada u dhiibay
Ee godobta ay naga qabaan guul ka dhiganaya
Ee gudaha Ceel-buur fadhiya war iga gaarsiiya
Murursade cad naga goosayoo waa laf gooniya’e
Gooshiga ha sugo haatan waan gogol ka jiifaaye
Sacad waa garaadkii fadhiyey guri waqooyaade
Saleemaana waa gaan kaloo gees xaggaa dega’e
Abgaal tan iyo Goob-weyn dabkiis galalacleynaaya
Waxba nagama goyn Duduble waa gar in la sheegaaye
Inta kale guddoonkii hadday gaalo naga qaadday
Godob weyn ma qabin eed yar waa laga gam’aayaaye
Gogoshaan ku wada jiifsannaa gacalo waa saase
Gardarriyo ba’naan kama qabnee gunuddu waa Cayre
Gu´ma jiro Hiraabow ninkii na afla-gaadeyne
Garba-duub gubeernadu hadday godolki noo haysey
Inaad saacaddii nagu gashaan gar alla maahayne (Faarax Cismaan Kowto).
Labadaas gabey waxay tusaale-dhig u yihiin, xilligaas qallafsan kala fogaanshaha ku yimid bulshadii Soomaaliyeed. Meel kasta oo ay aragtida Soomaali-wayn ka guntami lahayd, gumeystaha ayaa shiishka saarey si uu u toogto oo uusan u xirmin xarig-ummadeed. Sawir lamid ah buu ahaa sawirka maanta jira oo caadifaddu ay garwadeenku ka noqotey, caqligii lagu kala qiimeyn lahaa saxa iyo khaladkana uu bulshadu ku yaraadey. Waxay ahayd goor dhulkii Soomaaliyeed uu gacanta u galay gumeysi caddaan iyo madow leh. Laba gobol oo keliya ayaa maamulkii gumeysiga uusan xilligaas weli si buuxa u gaarin. Waxay ahaayeen labada gobol ee ah Mudug iyo Majeertiinya. Iyaguna sida muuqata maamulkii Talyaaniga ayaa dhanka koonfureed uga soo sikanayay.
Guddoomiyihii Talyaaniga Cesare Maria De Vecchi, wuxuu heley cimilo mashruuciisii hiillo u noqoneysa. Talyaanigii waxay markaas dhaqdhaqaaq ciidameed ka bilaabeen gobolka Hiiraan. De Vecchi wuxuu Xamar ka soo direy sarkaal sare oo halkaas ku ururiya ciidamo xooggan oo ka hor-taga kacdoonka Fallaago. Sarkaalka loo xil-saarey howshan wuxuu ahaa Leu. / Col. Splendorelle. Isaga waxaa la faray in uu ururiyo ciidankii Hiiraan u fadhiyay Talyaaniga. Waxaa weheliyay ciidan yar oo uu Xamar kala yimid.
Fallaago markii ay ka war-heshey howlaha uu Leu. / Col. Splendorelle ka bilaabay gobolka Hiiraan, dhankooda ayay iyaguna dhaqdhaqaaq ka bilaabeen. Sarkaalkan ayaa isaga oo aanan wakhti badan joogin degaanka, rag Fallaago kamid ah waxay ku dileen weerar dhuumaaleysi ah. Weerarka qabsadey Leu. / Col. Splendorelle wuxuu ku heley meel u dhexeysa Bud-Bud iyo Buulo-Berde. Isaga iyo koox la socotey ayaa gaadiidkoodii weerar duur-gal ah (ambush) lagu soo qaadey. Waxaa goobtaas ku dhintey Leu. / Col. Splendorelle iyo laba sarkaal oo kale. Dilkii Leu./ Col. Splendorelle waxaa ku dhicisoobey isku-deygii saddexaad oo Talyaanigu uu ku doonayay in maamulkiisa uu ku xasiliyo degmada Ceel-Buur.
Dhacdooyinkaas is daba-joogga ah, wal-wal xoog badan ayuu ku abuurey maamulkii Xamar fadhiyay ee uu odeyga ka ahaa De Vechhi.Markii ay guul-darrooyinkaas qabsadeen qorshihii ciidameed ee fashiistada, De Vecchi wuxuu ku dhaqaaqey tallaabooyin uu dib ugu saxayo qaabkii uu ku qabsan lahaa guud ahaan gobolka Mudug. Tallaabadii ugu horeysey waxay ahayd in duqeydii fadhidey Hobyo uu markab ku guro si uu Xamar u geeyo. Tallaabadaasi laba arimoodba waa uu uga gollahaa. Mid waxay ahayd, dhacdooyinkan ka dhacay Ceel-Buur in ayan dhiiri-gelin ka helin dadkii suldaanka daacadda u ahaa eek u sugnaa degaanka Hobyood. Si markaas uusan gadoodku u ballaaran. Midda kale waxay ahayd, han-jebis uu Fallaago la doonayay oo uu ugu muujinayay in xukunkiisii uu Hobyo caga-dhigtey. Sidaa darteed kacdoonkooda uusan wax wayn soo kordhineyn. Sidaas ayaa Suldaan Cali Yuusuf iyo xaashaadiisii waxaa lagu keeney Xamar, dabayaaqadaii sanadkii 1925-kii.
Dhacdooyinka Ceel-Buur, wal-walka ayku abuurtey De Vecchi, waxaa la wadaagey masuuliinta wasaaraddii mustacmaraadka ee Talyaaniga. Wasaaraddu waa ay ka aamusi weydey khasaarahaas ku yimid mashruucii De Vecchi. Wasiirkii wasaaradda ayaa wuxuu soo faray De Vecchi, laba guuto oo Ereteriya ka imanayay in ay dagaalka si toos ah uga qeyb-qaataan. Islamarkaas wasiirku wuxuu ku soo taliyay in hoggaanka labada guuto, si ku-meel gaar ah uu u yeesho sarkaalka ugu sareeya ciidamada Talyaaniga ka fadhiya Soomaaliya. De Vecchi, isaguna waxaa la faray in uu ku ekaado howlaha maamulka ee mustacmaradda Soomaaliya. Sarkaalka ciidanka hoggaaminaya, ayaa isaguna waxaa la faray, haddii ay arimuhu murgaan in uu si toos ah ula soo xiriiro abaanduulaha ciidanka Talyaaniga ee Rooma fadhiya. (The Collapse of the Somali State: The Impact of the Colonial Legacy, Abdisalaam Issa Salwe. 1996. London -UK).
Cesare Maria De Vecchi, dhankiisa ayuu wuxuu ka bilaabay siyaasad uu ku soo dhex-galo Soomaalidii reer miyiga ahaa, si ayan cududdooda isu qabsan. Wuxuu dhaqaale ku bixiyay fadhi ay ka soo qeyb-galeen cuqaal badan ee ka tirsan qabaa’ilka degaanka.
“ Fadhi ballaaran ayaa xilligaas waxaa lagu qabtay gobolka Hiiraan. Waxaa ka soo qeyb-galey qeybo kamid ah qabaa’ilka Hawiye ee ku dhaqan degaanka. Talyaaniga oo ahaa midka ka danbeeyey fadhigaas ayaa ujeeddadiisu waxay ahayd in uu colaad dhex-dhigo qabaa’ilka Daarood iyo Hawiye. Sida goor-danbe muuqatey, waa uu ku caana-maalay “. (Waxaanu ka soo xiganaey Siciid Cismaan Keenadiid. 10/ 4- 2010. Boosaaso – Soomaaliya).
Iyada oo arintu ay isku murugsan tahay, ayaa sidaanu soo xusney Suldaan Cali Yuusuf Hobyo laga soo qaadey oo Xamar la keeney. Tallaabadaasi waxay ahayd dhambaal uu De Vecchi u gudbinayo dadkii suldaanka daacadda u ahaa iyo kacdoonka Fallaago qudhooda. Wuxuu ku doonayay han-jebin iyo in la fahmo, maamulkiisa fashiistada ah in uu yahay midka ka talinaya degaanka. Tallaabadan uu De Vecchi ku soo qaadey suldaanka iyo middan uu ku dhex-galay qabaa’ilka, waxay u keeneen guul ka dhow middii uu ku doonayay weerarka iyo xoogga.
“ Dhab ahaan nadaamkii fashiistada ahaa wuxuu arimahan ku heley natiijo uga wanaagsan tii uu ku heli lahaa ololaha ciidmaeed. Weerarkii iska-caabinta ahaana si qabow ayuu hoos ugu dhacay. Degaankiina fowda ayaa ka bilaabatey, taas oo guul u ahayd siyaasaddii cusbeyd ee gumeysiga “.(The Collapse of the Somali State: The Impact of the Colonial Legacy, Abdisalaam Issa Salwe. 1996. London -UK).
Ciidankii laga keeney Ereteriya ee labada guuto ahaa waxaa weerarkoodii uu bilowdey iyada oo khilaafkii degaanka lagu abuurey uu xooggan yahay. Sidaa darteed, xooggii is-ka caabinta Soomaalida ma noqon mid hor joogsan kara awooddii Talyaaniga. Fallaago, iyaga oo uu hor-kacayo Cumar Samantar waxay u qaxeen Ogaadeenya. Tirada ay markaas ahaayeen waxaa lagu sheegaa toddobaatameeyo nin. Sidaas ayaa Talyaanigii uu ku galay degmadii Ceel-Buur, markey taariikhdu ahayd 26/ 12- 1925-kii.Jabkii ku dhacay awooddii Fallaago wuxuu soo af-jaray xukunka saldanaddii Hobyo
“ Halkaas waxaa ku gunaanadmay saldanaddii 41-ka sano ahayd oo Yuusuf Cali Keenadiid uu asaasey sanadkii 1884-kii, gumeysiguna dhib la’aan ku qabsadey. Xaakimkii gumeysiga wuxuu durbadiiba u magacaabey maamulayaal Talyaani ah, degmooyinka Hobyo, Ceel-Buur, Gaalkacayo, Gallaadi iyo Jirriiban “. (Taariikhda Soomaaliya, Maxamad Ibraahim Maxamad, 2000, s. 92, Muqdishow – Soomaaliya).
Fashiistadii waxay markaas si buuxda ula wareegtey degmooyinkii gobolka Mudug. Isla-markaas waxay u gacan-bannaanaatey in ay Majeertiinya weerar ku qabsato. Waxaa xusid mudan, dalabka hub dhigidda ah ee De Vecchi uu weydiiyey Boqor Cismaan, wuxuu ka horeeyey colaadda Fallaago iyo Fashiistada. Bishii abriil 1924-kii ayay ahayd markii ugu horeysey oo De Vecchi uu dhambaal u direy Boqor Cismaan uu kaga codsanayay in Boqorka uu hubka ka dhigo ciidamadiisa. E. Coronaro oo ahaa ninka u-kala ergeyn jiray Xamar iyo Baargaal ayuu ahaa ninka Boqor Cismaan gaarsiiyay fariinta.
Arintaasi markay dhacdey, Boqor Cismaan wuxuu ku baaqay fadhi ay isugu yimaadaan qabaa’ilkii degaanka ee uu odeyga u ahaa.
Gugii sanadkaas ayaa boqorku wuxuu fariistey dooxo kamid ah degaanka la yiraahdo Noobir ee u dhexeeya degmooyinka Xaafuun iyo Iskushuban. Halkaas ayaa waxaa isugu yimid in-badan oo kamid ah qabiilooyinka uu boqorku guddoonka u hayay. Fadhigaasi wuxuu ahaa mid ay si guud kaga arinsanayeen arinta ah in ay hubka dhigaan oo is-dhiibaan iyo in ay diriraan oo dhibaato diyaar u noqdaan. Cuqaashii ka soo qeyb-galay kulanka, muddo ayaamo ah ayay isku-dhaafsadeen wixii aragtiyaal iyo talooyin ahaa. Dabadeed guddoonkii waxaa lagu gunaanadey in aanan leys-dhiibin ee wixii la heli karo lagu dagaalamo. (Waxaan ka soo xiganey Cali Yuusuf Maxamuud – Cali-Islaan. 16/ 2- 2008. Masar – Qaahira).
Sheekooyinka xiisaha leh ee fadhigaas laga wariyey ayaa waxaa kamid ah, gabey uu goobtii ka tiriyay nin dhallinyar oo la yiraahdo Faratol Yuusuf Sharmaarke. Isagu wuxuu lahaa faras lagu magacaabo Xubbi. Goortii uu guddoonku dhacay ayuu inta is-taagay wuxuu qabsadey ceynaankii faraskiisa. Halkii ayuu wuxuu ka tiriyay gabey uu kula hadlayo faraskii. Isagu wuxuu yiri:
Tan iyo Ximirki deyreed waxaan xagada kuu daajey
Xaanxaan- tintii waxaan fardaha kaaga xero dhaafshey
Waxaan qoofalkaas kuugu xirey xarabad weeyaane
Xubbiyay rag leysugu xotomi laba xiniinyoode
Nin xishoonayaa waakan oo xirey billaawaha’e
Ninkaan xuural-ceyn doonahayn xowda how baqo’e
Xaar-xaaro Cali bey dagaal kaga xumeeyeene
Isagaa intuusan xarbiyin xoorey salabkiiye
Ineynaan xamaaliin geleyn xal aan ahaan weeye
Innagu xaadiriin beynu nahay xumiyo kheyraade
Boqorkii xariirtiyo ahaa xaalidiyo shaaha
Inuu haatan xaami isu rogey gaalo heys xuliso (Farato Yuusuf Sharmaarke)
Qaybaha kale ee qormada ka akhri: http://somalitalk.com/tag/eenow/
1 Jawaab " SOOMAALI-WAYN: Dhalashadeedii iyo Dhabar-jabkeedii| Casharkii VIII-aad "
Tuesday, August 23, 2011 at 4:27 pm
qoraaga waxaan weydiinay saldanada hobyo ma waxaa la aasaasay 1884 mise 1878?